Miseensonni WBO Xoollaay jiran 130 ol tahan ‘nyaata .. | Kichuu
Posted on April 15, 2019 by kichuu_admin
Miseensonni WBO Xoollaay jiran 130 ol tahan ‘nyaata summaa’e nyaachuun’ wal’aansa irra jiru
Miseensonni Waraana Bilisummaa Oromoo Xoollaayitti leenjii irra jiran nyaata summaa’aa nyaachuun dhukkubsachuu BBCtti himan.
(bbcafaanoromoo)—Miseensota Waraanaa ABO hospitaala Qiddus Luqaas magaalaa Walisootti yaalamaa jiran keessaa tokko akka maqaan isaa dhahamu hin barbaanne, kaleessa ganama ciree shaayee fi daabboo nyaatanii akkuma gadi bahaniin kukkufuu jalqabuu hime.
”Kubbaayyaa shaayee itti dhugne jalatti waan akka daakuu adiitu kuufamee jira. ”Kanas namoota mooricha hoggananitti agarsiisuun karaa namoota fooyyee qabanii akka qoratamu jennee turre jedhe.
Mallattoo akkamiitu isin irratti mul’ate? gaaffii jedhus, ”afaan nama goggogsa, garaa ciniinnaa, garaa gubaa, dhiiga waliin nama ballaqamsiisa, fuulas nama daalacheessa,” jedhan.
”Maal jaallan? waanti kunoo foolii summii aramaa qaba jedheenii, namni hundinuu kan hanga tokko baraaramuu danda’e dhibbaa dhibba dhugee hin fixne, inni kaan ni dhamdhamee dabarsee, sanumatu summii tahee nu miidhe malee. Achumatti dhiisne kaane harki caalu, foolii aramaa waan qabuuf.
Akkuma ciree nyaanneen daqiiqaa sadii hanga shanii kan hin caalle keessatti namni kukufuutti ka’e”.
Namootni dhukkubsatanii achitti hafanis waan jiraniif isaanis lubbuudhaan miidhamuu danda’u sodaa jedhus qabna jedhe Ibsaan.
Ibsaan akka jedhetti dheengadda hojjetaan waan baay’ateef ni hir’ifna jedhanii namoota jijjiranii ture jedhee guyya tokko booda miidhaan kun isaanirra gahuu hima.
Korri bittineessaa Oromiyaa eegumsa kan nuuf taasisaa jiru tahus isaanumatti naanna’ee kan isaaninis eegu humna raayyaa ittisa biyyaati jedha.
Miseensota waraana bilisummaa Oromoo kan waamicha araaraa abbootii gadaa fudhatanii galan OMN
Hanga kaleessa halkaniitii namoota 129’f yaalii kennaa turre jedhan. Haa tahu malee lakkoofsichi har’as dabalaa jira jedhanii namootumti nagaan warra miidhaman yaalsisuuf fidan illee dhukkubsachaa jiru jedhan.
Har’uma iyyuu gara nama 20 kan tahan dhufaniiru jedhan Dr Abdullatiif Yisiyaaq. Qaama qorannoodhaaf barbaaduufis samuda dhiigaa fi bobbaa fuunee qorannoo gaggeessineerra jedhanii kutaa labiraatoriidhaa argachuun ni danda’ama jedhan.
”Akka nutti mul’atutti summiitu [qorichatu] nyaatatti dabalame malee nyaatatu summaa’e jechuu miti. Isaan iyyuu fooliin summii nutti dhufaa ture jedhan.”
Dr Abdullatiif Yisiyaaq, mallattoon summii kan akka garaa kaasaa, dhiiga balaqqamsiisuu, garaa gubaa fi mataa dhukkubiin irratti mul’achaa jira jedhan.
Wal’aanamtoota yaalii argataa jiran kanneenitti deddeebi’ee waan ka’uuf hordoffii waan barbaachisuuf mooraa hospitaalichaa bakka uummatni naannichaa nyaataa dhiyeessafii jirutti yaalaa jirra jedhan.
”Nama du’ee boolla gahe irratti iyyuun waan nama galateeffachiisu hin qabu jiraatti dhufanii ni ilaaluu qabu ture.”
Dabalataan hanqinni nyaataa mooricha keessatti akka isaan mudataa ture himuun hir’ina qaamaaf nu saaxilaa jirra jennee iyyannee turres jedhan.
Ol’aantummaa seeraa fi heera mootummaa irratti leenjii akka fudhataa turan himanii guyyoota sagal sagalitti kan xumuramu dhimma dinagdee biyyaa irrattis leenjii eegaluuf turre jedhan.
Ibsaan akka jedhutti ammoo kana booda achi deebi’anii leenjicha irratti hirmaachuun rakkoo tahuu mala jedha.
Break News: WBO Mooraa Xoollay galaniif summiin..